Madaxweyne Trump oo doonayaa in Suudaan ay la saaxiibto heshiis | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Trump oo doonayaa in Suudaan ay la saaxiibto heshiis
Madaxweyne Trump oo doonayaa in Suudaan ay la saaxiibto heshiis
Arrintaas iyadoo lagu salaynayo Suudaan waxa ay aheyd in laga saaro liiska dalalka maalgaliya aragagixisada.
Inta Suudaan ay ku jirto liiska madow, waxaa sii soconaya cunaqabataynta saaran. Ganacsiyada Suudaan ee saxda ah ayaa la curyaamiyay, waxaa la xannibay maalgelinta tooska ah ee shisheeye halka Hay’adda Lacagta Adduunka iyo Bangiga Adduunka aanay dhaqaale siin karin dalkaas maadaama lagu leeyahay dayn aad u badan oo gaaraysa $72bn.
Markii dibadbaxyadii caanbaxay ay horseedeen in xilka uu bishii Abriil ee sanadkii hore uu banneeyo madaxweyne Bashiir, ayay Janaraal Burhan iyo Janaraal Xemeti xilka la wareegeen. Laba bilood kaddib ciidammadooda ayaa waxa ay Eileen in ka badan 100 qof oo dibadbaxayaal ah.
Previous articleDowlada oo diiday codsi ugu Yimid Ehelada marxuun Cali Khaliif Galeyr
Next articleQarax xalay mar kale ka dhacay magaalada Bayruut
Magacyada shirka Jabuuti Soomaaliya iyo Soomaliland